Resy Tamin’ny Fifidianana Anatiny Nataony Ny Antoko Mpanohitra ao Gresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2015 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, Deutsch, Español, русский, Français, English
Hoy ny vakin'ny soratra: “Demôkrasia Vaovao, antoko politika tokana manerantany resy tao anatin'ny fifidianana anatin'ny antoko .” Sary hita ao amin'ny pejy Facebook “Leme tin Alitheia” (Milaza ny Marina Izahay), niely an-tserasera.
Taorian'ny korontana tamin'ny fotoana mialoha ny fifidianana, narahan'ny fandresena lehibe tsy nampoizina tamin'ny volana Septambra 2015 nahavoafidy ny antoko politika SYRIZA an'ny Praiminisitra Alexis Tsipras, noheverina fa hanatontosa fifidianana anatiny ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Gresy, Demokrasia Vaovao mba hifidy filoha vaovaon'ny antoko tamin'ny 22 Novambra. Nandritra ny telo volana lasa, nanao fampielezan-kevitra teny rehetra teny ny kandidà efatra (Evaggelos Meϊmarakis, Kyriakos Mitsotakis, Adonis Georgiadis, ary Apóstolos Tzitzikostas), nitsidika tanàna ary mipaka tany amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny media sosialy ao Gresy mba hilaza amin'ny vahoaka momba ny antoko sy ny vinavinan'izy ireo momba ny hoavin'ny antoko. Tamin'ny Alahady maraina, anefa, miaraka amin'ireo mpanohana ny antoko efa nivory tao amin'ny birao fandatsaham-bato, tsy nandeha araka ny tokony izy ny rafi-panisam-bato, nitarika fanemorana ny fifidianana.
Araka ny tatitra, ny orinasa “Infosolution” no nahazo fifanarahana nifaninana tamin'ireo mpifaninana telo mba hitantana ny fizotry ny fifidianana. Toa tsy mampanahy ireo manampahefana ao amin'ny antoko Demôkrasia Vaovao nifidy azy ny tranonkala manokan'ny Infosolution mbola “eo an-dalam-panamboarana“. Ny tsy fetezana tamin'ny 22 Novambra izay nahatonga ny fifidianana tsy tontosa dia noheverina ho olana ara-teknika fa niharan'ny fahadisoana nahatonga azy tsy afaka mampiaraka ny milim-pifidianana amin'ny lisi-pifidianana elektronikan'ny antoko, ilaina hisorohana ny fandatsaham-bato indroa, ny rindrambaikon'ny Infosolution.
Tsy nampoizina, mila ho feno hipoka avy hatrany ny aterineto Grika, ahitana sioka sy lahatsoratra amin'ny media sosialy mitsikera ny tsy fahatontosan'ny fifidianana. Taty aoriana, nanjary lohahevitra malaza tao amin'ny firenena sy manerantany ny diezy #eklogesnd (#FifidiananaDemaokrasiaVaovao).
Lohahevitra malaza manerantany ny tsy fahafahan'ny Demaokrasia Vaovao manatontosa ny fifidianana anatin'ny antokony hifidy filoha vaovao.
Efijery farany talohan'ny nahasimban'ny rafitra
Vaovao manokana! Hitanay fa tompon'andraikitra tamin'ny tsy fahombiazana ny lohamilina! (hoy ny fivakin'ny sary: “Vaovao manokana! hitanay fa tompon'andraikitra tamin'ny olana tamin'ny fizotry ny fifidianana ny lohamilina”)
Mirohotra ny sioka mamazivazy ny @neademokratia noho ny tsy fahavitany manatontosa fifidianana izay ho filohan'ny antoko
Mampanontany ny tsy fahombiazan'ny fifidianan'ny Demaokrasia Vaovao: raha tsy mahavita mikarakara fifidianana izy ireo, iza no hatoky azy ireo hitantana ny firenena?
efijery mangan'ny fahafatesana
Vao avy nifoha, nahita ny tsy fahombiazan'ny #eklogesnd. Tsy nahatana hehy. Mampalahelo ny mahazo ny mpanohitra. Sy ny firenena.
Nahemotra ny fifidianana izay ho filoha vaovaon'ny @neademocratia androany maraina taorian'ny tsy fetezan'ny rindrambaiko! Mikendry hanjaka indray ity antoko ity.
Tsy nahatohitra ny governemanta Grika fa namazivazy ny mpanohitrany tao amin'ny Twitter ihany koa.
SYRIZA: Manantena izahay fa hanana antoko mpanohitra matotra sy tompon'andraikitra izahay atsy atsy ho atsy.
Nitatitra ny CNN Gresy fa mitady an'Andriamatoa Andreas Papamimikos (Filohan'ny Foiben'ny Komitim-pifidianana ao amin'ny firenena sady sekreteran'ny antoko) ireo mpanohana ny Demôkrasia Vaovao tezitra, mihevitra azy ho tompon'andraikitra tamin'ny tsy fahombiazana.
Taorian'ny tsy fahombiazan'ny fifidianana, mbola tsy mazava ny dingana manaraka ho ataon'ny antoko. Na inona na inona kasain'ny Demôkrasia Vaovao sy ny kandidàny efatra hatao, afaka manantena hiatrika fotoan-tsarotra ho avy izy ireo, mandra-panadinon'izy ireo ny henatra tamin'ity faran'ny herinandro ity.